Layaab Archives - Warkii.com-News and information about Somalia
Layaab	AKHRI FARIINTAAN:- Madaxweynihii hore Soomaaliya Sheekh Shariif oo Fariin Xamaasad leh u soo diray Madaxweyne Farmaajo iyo Shacabka Soomaaliyeed
Sheekh Shariif Shiikh Axmed oo mar soo noqday Madaxweynaha Soomaaliya xilligii uu dalka ku jiro kumeel gaarnimada ayaa ka hadlay halka loo raadinayo xalka Soomaaliya, wuxuuna hadalkaas ka dhawaajiyey xilli uu la hadlay wargeyska Alsunsana ee kasoo baxo dalka Sudan. Sheekh Shariif ayaa ammaan kala dul dhacay tijaabadii wadahadalada dib u heshiisiinta qaran ee dalka Sudan, wuxuuna door biday in Soomaaliya ay arrintaas kaga dayato wadanka Suudaan. ...
WAA MAXAY CIIDA EASTER-KA AY SAMEEYAAN KIRISHTAANKA?
Sidaan la socono manta oo Axada ah,waxaa waddamada Reer galbeedka ka dhacaya waxa ay u garanayaan Easter Day, midaasi oo ay ku sheegaan in ay u dabaal dagayaan, geeridii Nabi Ciise,a ama dib usoo noolaanshihii Nabi Ciise, midaasi oo Islaamkalay si cad ugu hadlay. Sidaasi oo kale Maalintii Jimcaha aheyd waxay u dabaal dagayeen, waxaan u garanayaan, Holy Friday, Great ...
Ninkaaga arintaan ha u sheegin Weligaa -Talo Ku socota Gabdhaha NINKAAGA ARINTAAN HA U SHEEGIN WELIGAA -TALO KU SOCOTA GABDHAHA
Haweenka qaarkood waxa jira in niyadooda iyo qalbigooda uu saafi yahay haddii ay wax wanaagsan ku argaan saaxibadooda ama qof ay garanayaan sida qof wax ku ool ah , dabeecad wanaagsan ayaa waxaa suura gal in ninkeeda ay uga sheekeyso isla markaana waqti loo joogo iyo xili aan loo jooginba ka bad-badisa . Arintaasi waxa ay keeneysa in qalbiga ninkeeda ...
Daawo Sawirro:Madaxweynaha ugu da’da weyn caalamka oo u dabaaldegay sanadguuradiisii 93aad
Hogaamiyaha dunida ugu da’da weyn, Robert Mugabe oo madaxweynaha ka ah dalka Zimbabwe, ayaa u dabbaal degay sannadguuradiisii 93aad. Xafladda dhalashadiisa waxaa ka qayb galay kumanaan taageerayaal ah, taasoo ka dhacday meel dibadda ka ah magaalada Bulawayo. Wuxuu ku labbisnaa koofi iyo shaar ay xaaskiisa naqshadaysay, wuxuuna sheegay inuusan carrabka ku dhufan doonin cidda beddelaysa. Xisbul-xaakimka ZANU-PF ayaa la sheegay ...
Muddo sanad laga joogo ayaa dalka Turkmenistan oo ku yaalla bartamaha Qaarada Asia waxaa uu noqday dalkii ugu horeeyey caalamka ee gebi ahaanba dadkiisa ka mamnuucay cabista iyo ka ganacsiga sigaarka. Madaxweynaha dalkaasi Gurbanguly Berdimuhamedow ayaana ganaax adag ku soo rogay qofkii lagu helo inuu cabayey ama ka ganacsanayey sigaarka, iyadoo cidii lagu arko laga qaadayo 6900 oo lacagta dalkaas ...
MUCJISO: Ilmo Ku Dhashay 4 Lugood Iyo 2 Xubnaha Hab-Dhiska Taranka Ragganimada.
Sabtidii la soo dhaafay oo ay bishan January ahayd 21-ka, waxaa dalka Hindiya ku dhashay ilmo yar oo leh 4 lugood iyo 2 xubin Hab-dhiska ragganimada Waalidkiisa waxay ku sheegeen Wiilkooda yar inuu yahay Haddiyad Rabbi, waa sida ay hadalka u dhigeen. Waxa uu ku dhashay Xarunta Caafimaadka Asaasiga ee Degmadda Raichur ee Gobalka Karnataka ee Koonfurta dalka Hindiya. Waalidka ...
Daawo Sawiradda Layaabka aduunka Kaluun Dhalo lamoodo Muuqaalkiisa
Waxaa dalka New Zealand meelkamid ah xeebihiisa kaluumeysato udhalatey wadankaas ay ka heleen kaluun aad loola yaabey inkastoo abuurka Alle ay tahay hadana waxaa arintaan aad u hadal haayey warbaahinta Calamka.
Layaabka Aduunka Magaalo Guryaheedu Albaabo Lahayn Tuugtuna Aanay Xadin
Magaalo ku taal waqooyiga dalka Hindiya oo lagu magacaabo, Shani Hignabur, ayaa dadka ku dhaqani aaminsan yihiin, in guryahooda aan la xadi Karin oo uu ilaalinayo sanam ay aaminsan yihiin oo lagu magacaabo Shani. Magaaladan ayaa guryaheedu aanay albaabo lahayn wax kastaana ay u dhex yaalaan dadka ku dhaqan, waxaanay ka tagaan isaga oo iska balaqan, sida ay ku warantay ...
Nin Addun Lacageed Ka Dhacay Bank Si Uu Xabsi U Muteysto Isagoo Dhibsaday Nolosha Guriga Ee Xaaskiisa
Nin ku nool Magaalada Kansas ee Dalka Mareekanka ayaa nolosha xaaskiisa ka doorbiday inuu xabsi galo. Ninkaan oo lagu magacaabo Lawrence John oo da,diisa lagu sheegay 70 sano ayaa Kansas City bank ka xaday Lacag asbuucii lasoo dhaafay si uu xabsi u galo isagoo dhibsaday nolosha Xaaskiisa kadib markii uu khilaaf soo kala dhex galay. Sida ay sheegtay maxkamadda, Lawrence ...